Japan Ngosipụta mbak eruda na Tokyo mpụta mbụ - News Ọchịchị
Japan Ngosipụta mbak eruda na Tokyo mpụta mbụ
iPad Ikuku (Photo Ebe E Si Nweta: John.Karakatsanis)
Mbak ke Japan Display — ụwa nnukwu onye rụrụ nke meziri maka smartphones na mbadamba na a isi Apple soplaya — adara on ha Tokyo mpụta mbụ Wednesday, esonụ a $3.2 ijeri mbụ ọha àjà.
The ngwaahịa, nke na otu ogbo furu efu ihe karịrị a ise nke ihe, ọpupu- 763 yen, a 15.2 percent dobe ya 900 yen ndepụta price, na otu nyocha akọwa losses dị ka a “ọdachi”.
The benchmark Nikkei ngwaahịa index okokụre 0.36 percent elu.
The mmiri mmiri crystal ngosi onye rụrụ urua ọnụ ya mbụ ọha àjà na ala ọgwụgwụ nke na-atụ anya, -atụ aro na investors bụ nọgide banyere ire ere, ma siri ọnwụ na ina di ike.
Japan Display esetịpụ a na-eduga 16 percent na-eto eto $35 ijeri zuru ụwa ọnụ ahịa n'ihi na smartphone na mbadamba hụ na i meziri, dị ka US dabeere na nnyocha ike NPD Group.
Na IPO bụ otu n'ime ndị kasị na Tokyo ebe ọ bụ na ọṅụṅụ ibu Suntory nri-and-onunu unit welitere $3.9 ijeri 2013.
Otú ọ dị, nnyocha na-dọrọ aka ná ntị na ọ chere ihu asọmpi tara akpụ site na ala-na-eri mba, gụnyere China, South Korea na Taiwan. Ka adreesị a, nke ike — guzo ha na 2012 site na mmakọ nke Hitachi, Toshiba na Sony si ọnwụ-eme LCD nkeji — na-achọ ka ibe mmepụta nke obere na-ajụ-sized hụ na i meziri.
Ma Seiichi Suzuki, ahịa nyocha na Tokai Tokyo Securities, gwara AFP: “Nke a bụ a ụlọ ọrụ na-bụ ndị nkeji offloaded ha nna na ụlọ ọrụ. (Ọ na-adịghị) nwere a ọdịnihu.”
Ọ si ike ekwesịghị inwe “amanye ya ndepụta”, citing a siri ike ahịa gburugburu ebe obibi na Nikkei index ala gburugburu 10 percent afọ a.
– 'Kemgwucha-akụda’ –
Japan Display tupu mgbe ahụ kwuru na ọ ga-ere 140 nde ọhụrụ mbak na n'etiti 900 yen na 1,100 yen, mgbe ya isi na nzuzo oke n'akụ ga offload 213.9 nde mbak.
“A ọdachi, enweghị mgbagha ọ bụla,” Lorne Steinberg, isi nke Montreal dabeere Lorne Steinberg Àkù Management, gwara Dow Jones Newswires.
“The ndibiat ga-abụrịrị na ma merụsịrị mispriced ma ọ bụ na investor isi, ghọtahiere. Na North America, -ere ahịa routinely akwado IPOs, nke mere na a ụdị nke oghere arụmọrụ nwere ike na-eme ma ọ bụrụ dum ahịa na-aga na mberede ọjọọ n'otu oge.”
Chris McGuire, Onyeisi nke Chicago dabeere na oke enweta ego Phalanx Capital Management, kposara niile mbak siri ike ọ zụtara azụta na-emeghe.
“The nkpoda price ọdịda bụ nnọọ ihe na-akụda na-egosi na ndibiat e overpriced na nke,” o kwuru, sị.
Apple akụkọ ihe fọrọ nke nta nke atọ na nke Japan Display si revenue, ma na ike ya na-ekwukwa ọzọ n'elu gadget eso ndị dị otú ahụ dị ka Samsung na Microsoft.
The ụlọ ọrụ e guzobere na ebumnuche nke na-enyere Japanese ụlọ ọrụ mma mpi na elu-mkpebi ngosi technology, nke ghọọ ụkpụrụ smartphones, mbadamba na ndị ọzọ na kọmputa ngwaọrụ.
The ọchịchị-kụziri Innovation Network Corp nke Japan ẹkenịmde banyere a 70 percent òkè nke ike, na atọ ngwá electronic Refeyim ọ bụla na-azọrọ na a roughly 10 percent n'elu osisi.
Ọtụtụ Japanese ngwá electronic na technology Refeyim agbalịsiwo na-adịbeghị anya ka ha na-eche ihu price undercutting site mba ọzọ rivals na-egbu mgbu losses na ụfọdụ n'ji ngwaahịa nkeji, gụnyere telivishọn ebe uru n'akụkụ peeji na-fere fere-mkpa.
Ozugbo-dike sịrị ndị dị otú ahụ dị ka Sony na Panasonic e emume-egbu mgbu nhazigharị mgbe afọ nke losses.
Sony a n'ọnwa kwuru na ọ ga-ere Njirimara na a prestigious Tokyo ebe o nwere ya n'isi ụlọ ọrụ isii ruo iri afọ, dị ka n'oge gara ụwa na-eti ike adọga ịrụzi ya ala akara.
Akụkọ a, Japan Ngosipụta mbak eruda na Tokyo mpụta mbụ, na-syndicated si AFP na-ezitere ebe a na ikike. Copyright 2014 AFP. Ikike niile echekwabara
25743	0 Apụl, Chicago, Emmanuel, Japan, Japan Display, Seiichi Suzuki, Sony, Tokyo
← Obi nkuchi misdiagnosed ka nchekasị na ndị inyom 'Chicken si hell’ amụkwasị ka a ghọtakwuo nnụnụ-dị ka dainosoo →